“Barcelona wali lama kulmin koox ku jirta qaab ciyaareedkeena” – James Milner – Gool FM
“Barcelona wali lama kulmin koox ku jirta qaab ciyaareedkeena” – James Milner
(Yurub) 19 Abriil 2019. Xidiga kooxda Liverpool ee James Milner ayaa kalsooni ku qaba in kooxdiisa ay garaaci karto Barcelona kulanka ay ku wada ciyaari doonaan wareega afar dhamaadka ee tartanka Champions League.
James Milner ayaa ku sheegay wareysi uu bixiyay in qaab ciyaareedka kooxdiisa Liverpool ay dhibaatooyin ku abuuri karto kooxda reer Catalonia ee Barcelona.
Reds ayaa kulanka lugta hore ee wareega afar dhamaadka tartanka Champions League ku booqan doonto kooxdaBarcelona garoonka Camp Nou 30 bishan Apriil, halka lugta labaad isbuuc kaddib ay ku wada ciyaari doonaan garoonka Anfield.
Hadaba xidiga kooxda Liverpool ee James Milner oo ka hadlayay kulanka Barcelona ayaa wuxuu yiri:
“Waxaan ka badin karnaa Barcelona, lakiin waan ognahay inay tahay wax aad u adag, waa koox xoogan, wayna adag tahay inaad ku ciyaarto garoonka Camp Nou, laakiin uma maleenayo inay horey ula soo ciyaareen kooxo badan ee heysta qaab ciyaareedkeena oo kale”.
“Waxaan halkaas ku soo ciyaaray 2 jeer ee horey, kulamada bug baxda ee Champions League, waagii aan ku sugnaa kooxda Manchester City, waxaana ku soo gaarnay natiijo fiican sidaasi darteed waxaan rajeynayaa in nasiib wanaagsan aan kala soo laaban doono markii saddexaad”.
“Barcelona waa koox awood badan, garoonka Camp Nou waa garoon ku fiican in lagu ciyaaro, jawi ahaana waa mid aad u wanaagsan”.
“Xaalada aad ayay u adkaan doontaa, waxaan rajeenayaa inaan soo bandhigno qaab ciyaareedka ugu fiican, laakiin si la mid ah iyagana xaalada ayaa ku adkaan doonta”.
Leroy Sane oo ka mid ah tiro ciyaaryahanno ah oo weydiistay kooxda Manchester City inay ka tagaan